Somaliland: Nama quseeyo xeerka isgaarsiinta Soomaaliya - BBC News Somali
Isgaarsiinta waa qeyb ka ah internet-ka
Wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa tilmaamay in xeerka uusan ka shaqeyn doonin deegaanadooda, uuna jiro shaircigooda u gaarka ah.
Wasiir Musdafe ayaa sheegay: "Xeerar caalami ah baa jiro oo lagu maamulo. Waxaa la ogyahay Soomaaliya (dowladda) gacanta wadanka kuma wada hayso. Marka anaga nagama xiri karaan. Maalin dhowna waxaan sameyndoonnaa wax noo gaar ah oo anagu leenahay."
"Wax dhibaato ah kama soo gaareyso. Waan la socodsiinay madaxdooda", ayuu yiri wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta ee Jamhuuriyada iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
"Xagga isgaarsiinta, wax aan ka wadahadalnay iyo wax inaga dhexeeyo ma jiraan. Waxaan markale ku celinayaa, xeerka madaxweynaha Soomaaliya uu saxiixay, Jamhuuriyadda Somaliland ma quseeyo," ayuu hadalkiisa ku adkeeyay Wasiir Musdafe.
Muxuu dhigayaa sharciga isgaarsiinta ee Soomaaliya
Jaangoynta canshuurta waxa uu sharciga u xilsaarayaa hay'adda isgaarsiinta qaranka oo la tashanaysa wasaaradda maaliyadda.
Dhageyso, Taliyaha Booliska S/land: Ma jiraan dad Beer iyo Kelyo lagala baxay
Dhageyso, Shir ku saabsan teknoolajiyadda oo Muqdisho lagu qabtay
Kumbiyuutar laga xaday Nancy Pelosi miyaa laga iibiyay Ruushka?